Roaming ပြသနာများနဲ. ၂ သိန်းတန် GSM | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Roaming ပြသနာများနဲ. ၂ သိန်းတန် GSM
Posted by ထိပ်တင် တုတ်ကြီး on Jul 23, 2012 in Copy/Paste | 8 comments
Roaming ဆိုတဲ.စာလုံးလေးကတော. လူကြီးမင်းတို. နားစိမ်းနေလတ္တံ။ ရှင်းပါအံ့။ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍဘက်မှာတော. Roaming ဖွင်.တယ် ဆိုတာ မန္တလေး မှာဝယ်တဲ. GSM ဖုန်းက ရန်ကုန်မှာပြောမရတာမျိုး၊ နယ်မှာဝယ်တဲ. ဖုန်းက မန္တလေး၊ ရန်ကုန်မှာ ပြောလို. မရတာမျိုး ဖြစ်နေရင် ရန်ကုန်မှာရှိတဲ. CE (mobile) ရုံးကို ကျွန်တော်တော. ဒီဖုန်းလေးက ဘယ်နယ်က ဝယ်တာဖြစ်တဲ.အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မှာ အသုံးပြုလိုပါသဖြင်. Roaming ဖွင်လှစ်ပေးပါရန် ဆိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဝယ်ယူခဲ.တဲ.ဆိုင် ၊ အဲ.ဒီကနေ ကဒ်ရောင်းခွင်.ရတဲ. ကုမ္ပဏီ မှ တဆင်. ရန်ကုန် CE ရုံးကို ပို.ရတယ်တဲ.ဗျာ အံ့ရော။ ဒါတောင် CE ရုံးက ကွန်ပျူတာ သမား ၂ ယောက်ပဲ ရှိလို. အလုပ်တွေ မနိုင်ပါတဲ.၊ ဖုန်းမပွင်.သေးလို. သွားမေးမိရင် အဆဲခံရဖို.သာပြင်ထား ၊ ဒီမှာ ၂ ယောက်ထဲရှိတာသိရဲ.လားတဲ. ။ သူတို.အတွက်တောင် ဝန်ထမ်း ထပ် ခန်.ပေးရမလို ၊ ဝင်ငွေကောင်းတဲ. ဝန်ကြီးဌာနက ဒီနေရာကျမှ ဘာကြောင်. လူမခန်.နိုင်တာပါလိမ်.။ နောက်တစ်ခုက ကုမ္ပဏီတွေ ကိစ္စ ၂ သိန်းတန် ဖုန်းလုပ်ခွင်. ရတဲ. ကုမ္ပဏီ ၁၅ ခု လောက်ထဲမှာ ရန်ကုန်မြို.နှင် အနီးတဝိုက် လုပ်ခွင်.ရတဲ.ကုမ္ပဏီကတော. သိတော်မူကြတဲ.အတိုင်း တေဇ ရဲ. ထူးကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို.နှင်. အနီး တဝိုက်မှာတော. ယခင်ဆက်သွယ်ရေးရဲ. လူကြီးဟောင်းတွေ ဇွတ်အတင်း ရှယ်ရာဝင်ထားတဲ. Asia Mega Link ဖြစ်တယ်။ နာမည်မကြီးတဲ. ကုမ္ပဏီတွေ လုပ်ပိုင်ခွင်. ရတဲ. နယ်တွေကတော. ချင်းတောင်တို.၊ ဘာတို.ပေါ.ဗျာ။ နောက် လုပ်ငန်းပြီးလို. စစ်ဆေးရေးဝင်စစ်တာမြင်လိုက်ပါရဲ. နာမည်မရှိတဲ. ကုမ္ပဏီကျတော. အဆောက်အဦ ကဘယ်လိုဆောက်၊ညာလိုဆောက်၊ တာဝါကို ဘယ်လိုထောင်၊ တာဝါဆေး အရောင်က ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ် နဲ. Htoo နဲ. Asia Mega Link ရတဲ. မြို.ကြီးတွေမှာ ဟိုတယ်အမိုးပေါ်တွေ မှာ BTS အင်တာနာတွေ မမြင်ချင်အဆုံးပဲ သူတို.ကျ ဘာ တာဝါမှထောင်စရာ မလိုပါလား။ သူတို.ကုမ္ပဏီလောကမှာလဲ လူကြီးကို အပေးနဲတဲ. ကုမ္ပဏီတော. သေဖို.သာပြင်ထား ဒေဝါလီခံသွားရမယ်မှတ်။ အဲတော.နယ်တွေမှာ ၂ သိန်းဖုန်းကို ဝယ်ရင် မြို.ကိုချက်ချင်း ယူသွားပြီးသုံးလို.မရပါ အနှီ Roaming ဆိုသော မည်ကဲ.သို.သော အရာကြီးမှန်းမသိ အားမျှော်လင်. စောင်.စားတော် မူရပါကြောင်း ၂သိန်း GSM ဆောင်ရွက်ခွင်. အားတောင်တန်းဒေသ များ၌ ရရှိသော ဘောစိ ငယ်လေးတစ်ယောက်၏ နှလုံးသားဟစ်ကြွှေးသံအား တင်ပြရင်း ရွာထဲကို ဝင်ခဲ.ပြီဗျာ။
About ထိပ်တင် တုတ်ကြီး
ထိပ်တင် တုတ်ကြီး has written6post in this Website..
မန္တလေးဂေဇက် အတွက် မန္တလေးသား တစ်ယောက်အနေနဲ. စာလေးပေလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ရေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ.စာလေးတွေ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ.ကြရင်လဲ ပြန်လည်ပြီး ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်.အနေနဲ. မန္တလေးဂေဇက်နဲ. ရွာသူ၊ ရွာသား အပေါင်းတို.အား စေတနာအမြဲ ထားလျှက်ပါ။ အများအတွက် အတွေးအမြင်နဲ. ဗဟုသုတ လေးတွေရဖို.သာ အများအားဖြင်. ရေးသွားမှာပါ။
View all posts by ထိပ်တင် တုတ်ကြီး →
Roaming ကိစ္စက ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကတာဝန်ယူပေးရမှာပါ။
နယ်ကျော် ဖုန်းကဒ်တွေ ပျောက်တာ၊ ပျက်တာတွေ ဖြစ်ရင် ငွေကုန် လူပန်းဖြစ်အုံးမယ်။
တကယ်ဆို အများပိုင်ကုမ္မဏီလုပ် ရှယ်ယာခေါ်
complaint center 106ခေါ်မရပါ။ဟူးးးးးးမောလိုက်ထှာ
နယ်တွေမှာ မြို့ပြင် ထွက်လို့မရပါ။ တိုင်တွေမြင်နေရပြီး လိုင်းပျောက်နေပါတယ် ခင်ဗျ။
မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာသူရယ် စိမ်းကား
မန်းတလေးက ရန်ကုန်ကိုရောက်သွားတဲ့ အသိတစ်ယောက် က
သူ့ ဖုန်း လိုင်းမိကြောင်းပြထားရဲ့ နက် ၊ အဝင်အထွက်လုံးဝ မရတော့ပါဘူး ဆိုလာလို့ 
ရွှေဂုံတိုင် လား… အဲဒီက ရုံးမှာ သွားဖွင့်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရတယ်။
၂သိန်းဖုန်းတွေ လွယ်မယ့်ဟာကို ခက်နေကြတာ နားမလည်ဘူးဗျာ..။
ထိပ်တင်တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြုံးချင်ချင် ဖြစ်သွားတယ်ဗျို့ 
ထိပ်တင် တုတ်ကြီး says:
ဒါတင်ဘယ်ကမလဲဗျာ။ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ စားမာန် ခုတ်တာလား၊ အချင်းချင်း လည်ပင်း နင်းတာလားမသိ။ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး မှာ ဝယ်တဲ. ဖုန်းကဒ်တွေကတော. နယ်မြို.လေးတွေမှာ ပွင်.တယ် ခင်ဗျ။ ဒီတော. စဉ်းစားကြည်.ပေါ. ခင်ဗျာ သူတို.ကဒ် တွေတော. ရောင်းရစေ။ တခြား ကုမ္ပဏီ က ကဒ်တွေတော. နာမည်ပျက်စေ အပေါက်မျိုး ဖြစ်မနေ ဘူးလား။ ဒါနဲ. ကိုကြီးမောင်ပေက ထိပ်တင် တုတ်ကြီး ကို ရင်ခုန်တယ် ဟုတ်စ ။
အင်းးးးလောလောဆယ် အကြွေးစနစ်နဲ့ တစ်လ(၄)သောင်း(၅)ကြိမ်သွင်း။